Xaalada JAILBREAK hadda ee iOS 8 [Abriil 2015] | Wararka IPhone
Xaaladda hadda ee JAILBREAK for iOS 8 [Abriil 2015]
Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo na weydiiya xaaladda hadda jirta ee JAILBREAK loogu talagalay macruufka 8.2 iyo macruufka 8.3. Sababtaas awgeed waxaan u qorayaa qoraalkan sida soo koobid si loo nadiifiyo qaar ka mid ah shakiga xaadirka ah iyo mustaqbalka ee ku saabsan JAILBREAK.
Waxaa jira dhowr khayaano / kooxo laxiriira JAILBREAK. Qaar ka mid ahi way ka fog yihiin "goobta" mana laga filayo inay wax qabtaan muddada gaaban, laakiin way sameeyaan waxaa jira 4 koox oo shaqeynaya si aad u awoodo inaad na siiso suurtagalnimada inaad meesha uga saarto xaddidnaanta iPhone-ka. Waxaan ku bilaabayaa ka hadalka 4-taan koox.
0.2 TaiG iyo Pangu
0.4 Hackers-ka aan firfircooneyn
1 JAILBELYADII UGU DANBEEYAY EE JAILBILAAD AH EE LA HELI KARO waa IOS 8.1.2
2 No JAILBILA ama lama filayo macruufka 8.2-8.3
3 Mustaqbalka JAILBREAK
Kooxda evad3rs waxay ka kooban tahay 4 haakaris: pimskeks, meereynta, pod2g y Musclenerd. Afarta xubnood waxay ku biireen horaantii 4 waxayna si wada jir ah u sii daayeen evasi2013n iyo evasi0n0, xabsiyo loogu talagalay iOS 7 iyo iOS 6 siday u kala horreeyaan. Intaa waxaa sii dheer, pod7g wuxuu mas'uul ka ahaa xabsiyo kale sida kuwa ku jira iOS 2.
TaiG iyo Pangu
Jeelasha ugu dambeeyay waxay nooga yimaadeen Shiinaha. Markii hore, TaiG waxay damacsanayd inay ku lifaaqdo bakhaar App-ka Shiinaha ah ee loo yaqaan 'evasi0n7 jailbreak' iyadoo lala kaashanayo evad3rs, laakiin bakhaarka ayaa lagala baxay noocyo cusub maxaa yeelay, sida laga soo xigtay evad3rs iyo Saurik, waxay huriyeen burcad-badeednimo. TaiG ayaa mas'uul ka ah jebinta ugu dambeysay loo sii daayay nooca dadweynaha ee iOS, kaas oo ah iOS 8.1.2. Kooxda kale ee jabsiga Shiinaha waa Pangu, oo sii daayay jeelka loogu talagalay iOS 8.0-8.1.
Jarmalku waa khabiir weyn, laakiin isagu kuma caanbaxo naxariistiisa. i0n1c wuxuu rabaa, sidaad fahmi karto, inuu lacag ku helo adoo siinaya waxa uu u arko adeeg ay adeegsadayaal badani ka faa'iideystaan. Tani waa sababta aysan u sii deynin wax xabsi ah oo dadweyne tan iyo iOS 4, laakiin way leedahay waxay u egtahay inay muujiso inaad haysatid JAILBILS oo la heli karo waqti dheer ka hor kuwa kale ee jabsada. Waxaa la sheegay in, si uun, tababaran Kooxda Pangu si loo horumariyo macruufka 8 JAILBREAK.
Hackers-ka aan firfircooneyn
Waxaa jira koodhadh kale, laakiin iyagu ma firfircoon yihiin xilligan. Mid ka mid ah ayaa ah winocm, laakiin waxaa saxeexay Apple, caqli ahaanna, ma furi doono wax xabsi ah inta uu heshiiska kula jiro shirkadda Cupertino. Xirmooyinka ugu dambeeyay ee iOS 6 adiga ayaa iska leh. Hackers kale oo weli taagan oo ku saabsan iOS waa comex, yaa mas'uul ka ahaa JAILBILAADKA ugu fudud ee loo fuliyo dadka isticmaala ilaa maanta, JAILBILYY oo laga sameeyay iPhone Safari: I JAILBREAK. Aniguna waxay ii tahay aniga inaan magacaabo hacker kale oo weyn, GeoHot, oo waliba ahaa mas'uul ka ah JAILBREAK PS3 iyo in waxqabadkiisii ​​ugu dambeeyay ee goobta uu ahaa inuu dib u eego jeelkii ugu horreeyay ee la xiriira Shiinaha si loo hubiyo amnigiisa.
Iyada oo intaas oo dhan la sharaxay, waxaan dooneynaa inaan faallo ka bixinno xaaladda JAILBREAK hadda.
Wax muhiim ah in la sharaxo waa taas nooca iOS ah in lagu rakibo, qalabku waa inuu helaa saxeex dhijitaal ah oo la socda rakibaadda. Markaan rakibeyno nooc kasta, iPhone-ka ayaa la tashanaya server-yada Apple wuxuuna kala soo baxayaa nooca cusub ee macruufka saxiixa software-ka. Saxeexan la'aanteed, ma awoodi doonno inaan ku rakibno nooc cusub oo iOS ah.
JAILBELYADII UGU DANBEEYAY EE JAILBILAAD AH EE LA HELI KARO waa IOS 8.1.2
Haddii aan ku rakibnay iOS 8.1.2, waxaan ku xiri karnaa iPhone-keena JAILBREAK Jilaa. Laakiin waa kaliya haddii aan ku rakibnay noocaas.
Haddii aan hayno nooc duug ah, ma awoodi doonno inaan u soo rarno macruufka 8.1.2 maxaa yeelay version ayaa sheegay in mar dambe la saxiixay, isagoo sida suurtagalnimada kaliya in lagu rakibo macruufka 8.3 taas oo ah nooca ugu caansan ee dadweynaha isla markaana, haddaba, midka kaliya ee xilligan la saxeexay.
Haddaan haysanno nooc ka sarreeya, ma awoodi doonno inaan hoos u dhigno macruufka 8.1.2 maxaa yeelay Apple ma ogola. Hoos u dhig qalabyada awoodda leh (sida iPhone 4) ma rakibi karaan iOS 8.
No JAILBILA ama lama filayo macruufka 8.2-8.3
Haddii aad haysatid macruufka 8.2, aad ayaan u qaldan ahay ama uma baahnid inaad sugto sii deynta jeel-jafka noocaaga ah. A JAILBREAK beta 2 noocaas waana la bilaabay maxaa yeelay Apple horey ayey u xirtay godadkii loo adeegsaday noocyadii hore. Si kale haddii loo dhigo, waxay sii daayeen jeel loogu talagalay beta 2 ee iOS 8.2 sababtoo ah JAILBILA ama ka faa'iideysigeeda midkoodna uma adeegi doono nooc mustaqbalka ah.
Taladayda, waana wax aan aniga lafteyda sameeyay, taasi waa taas Haddii aad haysatid macruufka 8.2, rakib macruufka 8.3. Ugu yaraan waxaad lahaan doontaa nidaamka ugu casrisan.
Waan ognahay in noocyadan ay nugul yihiin maxaa yeelay i0n1c wuxuu horey usii daayay fiidiyaha caadiga ah taas oo loo sameeyo si loo muujiyo in JAILBILY lagu guuleystay. Waxaa loo sameeyay qaab macruufka 8.4 Beta 1, laakiin noocyada hadda jira waxay leeyihiin cillad isku mid ah ama ka badan tan macruufka 8.4.
Mustaqbalka si fudud lama hubo. Nidaamka qalliinka ee qumman ma jiro, sababtan awgeed, had iyo jeer waxaa jiri doona xabsiyo cusub. Shakigu waa "goorma”. Sida caadiga ah, markaan ku jirno taariikhaha sida kuwa hadda jira, oo ay in ka yar bil ka harsan tahay bilowga cusboonaysiinta weyn ee macruufka, JAILBILAND ma soo bixi doono. Hackers-ku waxay tixgeliyaan halka uu JAILBILYADA hadda ku sugan yahay iyo faa iidada uu u leeyahay JAILBILYADA cusubi inuu keeno waqtiga la bilaabay Fikraddu waa taas IOS 8.1.2 waa nooc deggan oo ku filan in "laga tago meesha la dhigay" JAILBREAK ilaa noocyada mustaqbalka leh warar muhiim ah. Inta udhaxeysa macruufka 8.2 iyo iOS 8.4, waxyaabaha muhiimka ah waa barnaamijka Apple Watch iyo barnaamijka muusikada ee soo socda ee iOS 8.4, wax jabsadeyaasha ah ayaa tixgelin doona peccata minuta marka la barbardhigo waxa imaan doona bisha Juun (si cad ayaa loo sii daayay Sebtember). Uma adeegsan doonaan ku-adeegsiga dhib-ku-helidda noocyo badan oo aan runtii isbeddel weyn lahayn.
Haddii aan sanadihii hore tixraac u qaadanno, waa inaan samirnaa haddii aan rabno inaan JAILBILNAYNno iPhone-keena. JAILBREAK (in kastoo aan khaldami karo) Lama sii deyn doono illaa Apple ay si guud u sii deyso macruufka 9 oo ay u hagaajiso cilladaha ugu horreeya ee iOS 9.0.1. In kasta oo waxa aan dhihi doono laga yaabo inay ka careysiiso, waxa caadiga ah ayaa ah, ugu horreyntii, ma jiri doono JAILBILBILO illaa Oktoobar, adoo aad u rajo qaba, in kasta oo ay sidoo kale run tahay in imaatinka Shiinaha ee goobta ay ka dhigi karto muuqan waqti hore. Waxaa jira tallaal dheer oo ah in Pangu ama TaiG ay sii deyn doonaan macruufka iOS 8.4 kaas oo la filayo in si rasmi ah loo sii daayo dhammaadka Maajo ama horraanta Juun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Xaaladda hadda ee JAILBREAK for iOS 8 [Abriil 2015]
Ku jawaab Ariel Veli
Mahadsanid !!! Hada shakigeyga sifiican ayaa loo cadeeyay, waa inaan sugno laakiin walaac weyn, maxaa yeelay waxaan rabaa inaan iibsado Apple wacth iyo ilaa ay ka soo baxdo xitaa JAILBREAK ee IOS 8.2 ee aan soo bixi doonin, waan sugi doonaa IOS kii ugu dambeeyay ee noqon doona macruufka 8.4.X, hadda waan ka taxaddarayaa inaan rakibo tweaks !! MAHAD BADAN !!
Waan ku faraxsanahay inaan arko inay jiraan wax ka badan Apple Watch, maxaa yeelay waxaan ka hadlaynay arrintaas dhowr toddobaad
wuxuu noqdaa xoogaa xanaaq badan
Ku jawaab xilan
Waxaan u maleynayaa in qofna uusan si fiican u sharxi karin. Runtii waan kugu hambalyeynayaa maqaalkaaga quruxda badan. Sababtoo ah qodobbada noocan oo kale ah kama seegi doono hal war oo ka imanaya boggan. Waad salaaman tihiin dhamaan tafatirayaasha !!
Waa hagaag, aad ayaan ugu faraxsanahay iPhone 6-ga IOS 8.1.2 iyo jeelka, kaas oo jidka agtiisa uu yahay midka ugu xasilloon dhammaan kuwa aan isku dayay.
Marka waxaan sugi doonaa wax kasta oo ay qaadato inta tan ku xigta ay soo baxeyso iyadoo aan loo eegin nooca ay tahay 🙂
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay iPhone 6Plus iyo iPad 3G. Shaqaynta weyn.
Halkan waxaan ku sii jirayaa in muddo ah.
Haye, ma ii sheegi kartaa sida aan u xidho waxaan haystaa 8.1.2 laakiin iima oggolaan doonto inaan sameeyo, waxay i siisaa qalad taig ah oo leh waa inaan cusbooneysiiyaa itoom waana la cusboonaysiiyaa ma fahmin
Ku jawaab klibula
Waxaan haystaa macruufka 8.1 ee JAILBREAK waana ku fiicanahay sidaas inkasta oo markaan haysto saacadda la igu qasbi doono inaan cusbooneysiiyo (inkasta oo waqti kasta oo saacaddu u muuqato inay sii fogaaneyso)
Maxaa talo ah oo aad sameysaa, cusbooneysii macruufka ugu dambeeya si aad uga baxdo jeelka sida aad u sameysay ...
Sidee ku heshay cowska, ma waxaad dooneysaa in kuwa kale iyaguna quursadaan?
Xaqiiqdii maya. Looma xiri doono macruufka 8.2. Ahaanshaha noocaas, waxaa fiican inaad cusboonaysiiso oo aad haysato nooca ugu dambeeya.
Ma lihid fahanka aqrinta maxaa yeelay ma aadan fahmin waxa uu tifaftiraha doonayo inuu dhaho (taas oo aan u maleynayo in inta badan ee halkaan maray ay fahmeen). «Waad sameysay», «waad la kulantay» ... Ku darista «s» dhammaadka waagii hore qofka labaad waa qalad ka imanaya dadka aan ka taxaddarin inay si taxaddar leh u dhageystaan ​​ereyada, ama kuwa aan wax akhrin ama cidda iskuulku yaryahay ... ama dhammaan waxyaalaha kor ku xusan.
Sida saxda…. Waa inaad sifiican u aqrisataa kahor intaadan bilaabin weerarka ... Maqaal aad ufiican ..
Waxaan ku faraxsanahay iPhone 5skeyga 8.1.2, ma aanan dooneynin inaan iibsado 6da maxaa yeelay waxaan dareemayaa inay la imaaneyso nooc aan jajab la jabin karin, iPhonena maheysan karo JAILBIL la'aan la'aan .. Salaan kadib
Jaai wuxuu la imaan doonaa macruufka 8.4 ... maqaalladaani wax fikrad ah malahan ... waligood sax ma ahan .. dhammaantood waa .. waad ogtahay .. iOS 8.4 waa qodobka
Dadka Apple uma muuqdaan inay yaqaanaan "JAILBREAK MAYA", ma iibin doonaan galabnimo.
Ku jawaab Piwi
Waad ku mahadsantahay macluumaadka ... Waan arkaa sababta aan u xallin kari waayey qaladka 3194 xD
daanka benz dijo
Hagaag, JAILBILA ayaa durbaba soo baxay inkasta oo waxaad dhahdo taasi macquul maahan, waa inaad dhahdaa si ay u dhacdo hehe
Ku jawaab jaw benz
Raadi iOS 8.2 JAILBILE semi
Jawaab Roke Waldobbinos
Naqshadaynta Galaxy S6 ma xukumaan mabaadi'da aasaasiga ah ee isu ekaanta